सुन्दर देखिन शरीर जलाउने देखि जुकालाई टोकाउनेसम्म गर्छन् यी अभिनेत्री - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
सुन्दर देखिन शरीर जलाउने देखि जुकालाई टोकाउनेसम्म गर्छन् यी अभिनेत्री
१३ असार २०७४, मंगलवार १४:०९ 6
सुन्दर देखिन सबैलाई मन लाग्छ । तर विशेष गरी अभिनेत्रीहरु यसमा बढी सजग र सचेत भएको हामी पाउँछौँ । अभिनेत्रीहरु सुन्दर देखिनको लागि के के सम्म गर्छन् ? त्यसको अन्दाज पनि कसैले गर्न सकेको हुँदैन । यस्तै सबैलाई चकित पार्दै अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाले सुन्दर देखिन एक थेरापी गरेकी छिन् जुन निकै पीडादायक हुन्छ । उर्वशीले सुन्दर देखिनको लागि कपिंग थेरापीको सहारा लिएकी छिन् जुन युनिक हुनुका साथै निकै पीडादायि छ । कपिंग थेरापी एक किसिमको चाईनिज रिलेक्सेशन थेरेपी हो । यसको माध्ययमबाट शरीरको भित्र भएका नराम्रा कुराहरु बाहिर निकालिन्छ । र पछि स्किन टिश्युको अक्शिजन र अन्य तत्वहरु छालाको गहिराईसम्म पुर्याईन्छ ।
यसमा एक्युपंचर स्पेशलिस्ट कटनका डल्लाहरु पहिले रक्सीमा भिजाईन्छ र काँचका साना–साना ग्लास या कपमा राखेर त्यसमा आगो लगाईन्छ । पछि त्यो आगो निभाएर तातो भाँडालाई तुरुन्तै छालामा राखिन्छ । यो थेरापी बलिवुडमा यस अघि विजे बानीले प्रयोग गरेकी छिन् ।
हलिवुड रियालिटी स्टार किम कारदर्शियन सुन्दर देखिनको लागि ‘प्लेटेलेट रिच प्लाज्मा’ थेरापी गर्छिन् । यो थेरापीमा शरीरबाट रगत निकालेर त्यसलाई फेरि सुईबाट छालामा पठाईन्छ ।
अभिनेत्री डेमी मूरको सुन्दराताको राज हो जुका । उनी आफ्नो छालाको चमक कायम राख्नको लागि जोंक थेरापी गर्छिन् । यो थेरापीको लागि उनी प्राय अस्ट्रेलिया जाने गर्छिन् । यो थेरापीमा धेरै जुकाहरु एकसाथ राखेर छालामा टोकाईन्छ जसले छाला जवान र चम्किलो देखिन्छ । तर यो थेरापी गर्दा निकै पीडा हुने गर्दछ । तर यो उपचारले छाला सम्बन्धि रोग पनि लाग्दैन ।
अभिनेत्री ग्विनिथ पाल्ट्रो चाउरीपनबाट बच्नको लागि सर्पको बिषबाट बनेको क्रिमको प्रयोग गर्छिन् । यसको प्रयोगले अनुहारको चाउरीपन हराउँछ । ग्विनिथ यो क्रिम प्रयोग गर्ने पहिलो अभिनेत्री भने हैनन् । यस अघि अभिनेत्री केईरा नाईटली र जेसिका सिम्पसनले पनि सर्पको बिषको ट्रिटमेन्ट आफ्नो ओठमा गरिसकेका छन् । यो निकै पीडादायक हुन्छ ।
अभिनेत्री हेली बेरी कम उमेरको देखिनको लागि कफिले शरीर स्क्रब गर्छिन् । यसले रक्तसञ्चार राम्रो रहन्छ र छाला कलिलो बनाउँछ ।
गायिका जेनिफर लोपेज सुन्दर हुनका लागि अचम्म लाग्दा उपचारहरु गर्छिन् । जसमध्येको एक हो ह्युमन प्लेसेंटा फेशियल । उनी स्किन चम्किलो रहिरहोस् भनेर रेगुलर ह्युमन प्लेसेंटा फेशियल गराउँछिन् ।
अभिनेत्री केटी होम्स प्लेसेंटा क्रिम प्रयोग गर्छिन् । प्लेसेंटा नालबाट बनेको क्रिम हो । प्लेसेंटामा भएको पोषक तत्वले छालालाई चम्काउन मद्दत गर्छ ।
अभिनेत्री स्कारलेट आफ्नो छालाको खुबै ध्यान राख्छिन् । उनी छालाको चमक कायम राख्नका लागि साईडर सिरका पयोग गर्छिन् । एक अन्र्तवार्तामा स्कारलेटले यसको खुलासा गरेकी थिईन् ।
फेशन डिजाईनर विक्टोरिया बेकहम सुगाको दिशाले फेशियल गराउँछिन् । यसले उनको अनुहारको चमक कायम राख्छ ।
उर्वशी रौतेलाकिम कारदर्शियाग्विनिथ पाल्ट्रो
के सनी लियोनीले मारेकी हुन् त आमालाई ? सनी लियोनीको जीवनका ९ रहस्य
२ हजार करोड कमाउने पहिलो भारतीय सिनेमा बन्यो दंगल
शिल्पी थियटरमा ‘रात चिर्न्या भानु’
सानो चोट भने लाग्यो दुख लाग्नु स्वभाविक हो : कोमल वली